Igumbi labucala kwi-Uco Valley
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMaria Veronica
Igumbi kwikhaya labucala eTunuyan, eValle de uco. Malunga neebhloko ezili-15 ukusuka kwiziko elinendlela yebhayisekile ukuthatha uhambo okanye ukukhwela ibhayisekile kwaye ukonwabele imbonakalo. Ibekwe kumgama oziikhilomitha ezingama-40 ukusuka eManzano Histórico kwaye malunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kwezona ndawo ziphambili zewayini kunye neeresityu zendlela yewayini.
Igumbi kwindlu entsha, kunye nazo zonke iinkonzo zokuchitha ukuhlala kamnandi kakhulu entliziyweni ye-Uco Valley, indawo ezolile kwaye ezolileyo yokuphumla okuhle kakhulu. UVeronica noSabrina bahlala. IBono kunye neCinnamon (izilwanyana zasekhaya ngaphandle kwendlu)
4.71 ·Izimvo eziyi-19
4.71 out of 5 stars from 19 reviews
4.71 · Izimvo eziyi-19
Ifakwe kwiibhloko ezimbalwa ukusuka kumbindi weTunuyán, indlela efanelekileyo yebhayisekile yokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile. Kwaye ukuba awunakho ukuhamba kwakho, ungasebenzisa iiteksi kunye nezixhobo.
Umbuki zindwendwe ngu- Maria Veronica
Anfitriona en Tunuyán para mostrar la naturaleza del Valle de uco
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$48